Nharireyomurindi | December 2015
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese (Yunnanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Chiyao Cibemba Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kamba Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Malagasy Maltese Maya Myanmar Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese (Brazil) Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Vietnamese Wallisian Waray-Waray Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
“Mukuru wevapristi Jorge Mario Bergoglio, S.J., akasarudzwa kuti ave Papa wechechi yeRoma wechi265, achitora chinzvimbo chaPetro.”—VATICAN INFORMATION SERVICE, VATICAN CITY, MARCH 13, 2013.
“Papa wechechi yeRoma ndiye ane simba pamusoro peChechi pasi pose sezvo ari iye akatsiva Musande Petro, uyo akapiwa simba iroro naJesu.”—THE PRIMACY OF THE BISHOP OF ROME DURING THE FIRST THREE CENTURIES, 1903, BY VINCENT ERMONI.
“Kana paine munhu anoti . . . Papa wechechi yeRoma haana simba seraiva naPetro uyo ainge akaropafadzwa; ngaaonekwe semunhu apandukira chechi.”—THE FIRST VATICAN COUNCIL, JULY 18, 1870.
MAMIRIYONI evanhu vechechi yeRoma pasi rose, vanoremekedza chaizvo mutemo uyu wakadzikwa muna 1870 neVatican Council yekutanga, uye mutemo iwoyo idzidziso yavanofanira kubvuma vachida vasingade. Asi, mubvunzo watingabvunza ndewekuti, Dzidziso iyoyo inobva muMagwaro here? Ko ndizvo here kuti Pope Francis ndiye ava pachinzvimbo chemuapostora Petro? Uyewo Petro ndiye aiva Papa wokutanga here?
“PAMUSORO PORUWARE URWU NDICHAVAKA KEREKE YANGU”
Mutemo wakadzikwa muna 1870 neVatican Council waibva zvikurukuru pamanzwisisiro avaiita Mateu 16:16-19 naJohani 21:15-17. Kukurukura kwakaita Jesu naPetro mundima idzi dzeBhaibheri nedzimwewo, kunoratidza kuti muapostora Petro aiva nebasa rinokosha paitanga chiKristu. Pavakatanga kuonana naPetro, Jesu akatotaura kuti Petro aizofanana nedombo pane zvaaizoita muupenyu hwake. (Johani 1:42) Ko Jesu akapa Petro masimba ekutonga muchechi here?
Pana Mateu 16:17, 18, pane mashoko akataurwa naJesu kuna Petro ekuti: “Ndinoti kwauri, ndiwe Petirosi [kana kuti Petro, zita rinoreva kuti “dombo”], pamusoro poruware urwu ndichavaka kereke yangu.” * Jesu aireva here kuti “kereke” yake kana kuti ungano, yaizovakirwa pana Petro, munhu wenyama? Ko Petro ndiye here aifanira kuzova mukuru pavateveri vose vaJesu? Vamwe vaapostora vaivapo vakanzwisisa sei mashoko aJesu? Mabhuku eEvhangeri anoratidza kuti papfuura mazuva, vadzidzi vaJesu vaigara vachiitisana nharo dzokuti ndiani aiva mukuru pakati pavo. (Mateu 20:20-27; Mako 9:33-35; Ruka 22:24-26) Saka kudai kuri kuti Jesu ainge apa Petro masimba ekuva mukuru wevaapostora vese, vaizodai vakanetsana kuti ndiani aiva mukuru here?
Ko Petro pachake, akanzwisisa sei mashoko aJesu? Sezvo Petro aiva werudzi rwechiIsraeri, anofanira kunge aiziva uprofita hwakati kuti hwechiHebheru hwaitaura ‘nezvedombo’ kana kuti ‘ibwe rekona.’ (Isaya 8: 13, 14; 28:16; Zekariya 3:9) Mutsamba yaakanyorera vaainamata navo, Petro akatsanangura kuti “ibwe rekona” rakataurwa mune humwe uprofita hwacho ndiIshe Jesu Kristu, kureva Mesiya. Petro akashandisa shoko rechiGiriki rekuti pe’tra (shoko rinowanikawo mumashoko aJesu ari pana Mateu 16:18) achireva Kristu chete.—1 Petro 2:4-8.
Muapostora Pauro aiva mumwe wevateveri vakatendeka vaJesu. Pauro aifunga here kuti Jesu akanga apa Petro simba pamusoro pevamwe? Pauro akanyora kuti Petro aiva mumwe wevaya “vainzi mbiru” zvichiratidza kuti aiziva kuti Petro aiva nebasa rinokosha muungano yechiKristu. Saka Pauro aiziva kuti kwaisangova ‘nembiru’ imwe chete. (VaGaratiya 2:9) Uyewo kana kuri kuti Petro ainge agadzwa naJesu semusoro weungano, zvaisazova nemusoro kuti angoperera pakunzi mbiru nevaainamata navo.
Paakanyora nezvezvimwe zvisina kukodzera zvaiitwa naPetro pamabatiro aakaita vamwe vanhu, Pauro akataura neruremekedzo asi asingapotereri kuti: “Ndakamudzivisa pachena, nokuti akanga ane mhosva.” (VaGaratiya 2:11-14) Pauro haana kumbova nepfungwa yekuti Kristu akavakira ungano kana kuti chechi yake pana Petro kana kuti pane mumwe munhu wenyama. Asi aiziva kuti nheyo yeungano ndiJesu Kristu. Pauro aiziva kuti ‘dombo iroro ndiKristu.’—1 VaKorinde 3:9-11; 10:4.
‘NDIWE PETRO . . . ’
Saka mashoko ekuti: “Ndiwe Petirosi [Petro], pamusoro poruware urwu ndichavaka kereke yangu” anorevei? Kuti tinzwisise mashoko anenge atorwa pane imwe nyaya, tinofanira kuverenga nyaya yacho yose. Jesu naPetro vakanga vachitaura nezvei? Jesu akanga achangobva kubvunza vadzidzi vake kuti: “Ko imi munoti ndini ani?” Petro akabva angopindura kuti: “Ndimi Kristu, Mwanakomana waMwari mupenyu.” Jesu akamurumbidza, ndokubva awedzera kuti aizovakira “kereke” kana kuti ungano yake ‘paruware’ rwakatosimba kupfuura Petro. Ruware irworwo kana kuti dombo ndiJesu uyo Petro ainge achangobva kutenda maari.—Mateu 16:15-18.
Mashoko ekuti: “Ndiwe Petirosi [Petro], pamusoro poruware urwu ndichavaka kereke yangu” anorevei?
Vakawanda vevainzi ndivo “vanaBaba veChechi” vakanyorawo kuti dombo rinotaurwa pana Mateu 16:18 ndiKristu. Somuenzaniso, makore ari pakati pa401 na500, Augustine akanyora kuti: “Ishe akati: ‘Padombo guru iri ndichavakira ungano yangu,’ nokuti Petro ainge amuudza kuti: Ndimi Kristu, Mwanakomana waMwari mupenyu.’ Saka ndichavakira Chechi yangu padombo guru iri rawatenda mariri.” Augustine akanyora kakawanda kuti “Kristu ndiye Dombo (Petra).”
Kana pakashandiswa dzidziso dzechechi yeRoma dziripo iye zvino, vanhu vakaita saAugustine nevamwe, vaizoonekwa sevapanduki. Sezvakataurwa nemuongorori wezvechitendero wekuSwitzerland anonzi Ulrich Luz, kuwirirana kuri kuita vaongorori veBhaibheri panyaya iyi mazuva ano kungadai kwakarambwa, kuchinzi inhema neVatican Council muna 1870.
PAPA NDIYE ARI PANZVIMBO YAPETRO HERE?
Muapostora Petro ainge asingazive nezvezita rekuti “papa.” Chokwadi ndechekuti mumakore ekuma800, mamwe mabhishopu asiri echechi yeRoma aizvipa zita iroro. Kunyange zvakadaro, zita iroro rakazotanga kushandiswa sezita rekuratidza chigaro makore ekuma1000 ava kunopera. Uyewo pavaKristu vekutanga, hapana aifunga kuti Petro ainge apiwa simba rekuva mukuru kune vamwe uye kuti paizova nevanhu vaizotsiva chinzvimbo chake vachitevedzana. Ndokusaka muzvinafundo wekuGermany anonzi Martin Hengel akazoti “hapana uchapupu hunogutsa hunowanika kune vanoongorora nyaya dzekare kana kuti dzechitendero hunogona kutiratidza kuti chinzvimbo chekuva papa chakabva kupi.”
Kubva pane zvatakurukura, tingati Petro ndiye aiva papa wekutanga here? Pane here aizosara achitora nzvimbo yake? Dzidziso yechechi yeRoma yekuti papa ndiye ane simba pamusoro peChechi pasi rose ndeyemuMagwaro here? Mhinduro yechokwadi yemibvunzo yose iyi ndeyekuti kwete. Chokwadi chiri pachena ndechekuti Jesu akavakira kereke kana kuti ungano yake yechokwadi paari iye pachake. (VaEfeso 2:20) Saka zvakakosha kuti mumwe nemumwe wedu azvibvunze kuti, Ndiri muungano iyi yechokwadi here?
^ ndima 8 Mashoko emuBhaibheri ari munyaya ino akatorwa muThe Bible in Union SHONA Version (Standard Orthography).
Matangiro Akaita Chigaro chaPapa
32 C.E.: Jesu anotaura kuti achavaka kereke yake, kana kuti ungano paari iye pachake; haana kumboti muapostora Petro aizova mukuru pane vamwe
55-64: Muapostora Pauro naPetro vanonyora tsamba dzinoratidza kuti Jesu ndiye oga nheyo yeungano yechiKristu
254-257: Stephen, bhishopu wemuchechi yeRoma anozviti ndiye mukuru pamabhishopu ose uye kuti ava pachinzvimbo chaPetro; asi mamwe mabhishopu akadai saFirmilian wekuCaesarea naCyprian wekuCarthage, vanoramba zvakataurwa naStephen
296-304: Mashoko akaita zvekutemererwa ekuti “papa,” kana kuti “pope,” anowanikwa kekutanga achireva bhishopu weRoma
401-500: Mumwe bhishopu weRoma, Leo I, anoshandisa Mateu 16:18 kuratidza vanhu kuti ndiye mukuru pane mamwe mabhishopu
501-600: Shoko rekuti papa (pope) rinowedzera kushandiswa richireva bhishopu weRoma; zvisinei mamwe mabhishopu asiri eRoma akaramba achishandisa zita iri kusvika pamakore ari pakati pa801-900
1075: Gregory VII anozivisa kuti shoko rekuti “papa” (pope) rinofanira kushandiswa pana bhishopu weRoma chete. Mugwaro rake rinonzi Dictatus Papae (Zvinotaurwa naPapa), anoita kuti ‘zviite sekuti chigaro chapapa ndicho chinotora chinzvimbo chaKristu,’ sekutaura kunoita mumwe muongorori wenhoroondo dzekare
1870: Vatican Council yekutanga inopa mutemo wekuti “Papa weRoma ndiye anotora chinzvimbo chaPetro Akaropafadzwa, Mukuru weVaapostora, uye Munhu Anomiririra Kristu, uye Musoro weChechi”
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Petro Ndiye Aiva Papa Wokutanga Here?
NYAYA IRI PAKAVHA Sei Tichifanira Kunzwisisa Bhaibheri?
NYAYA IRI PAKAVHA Bhuku Rinofanira Kunzwisiswa
NYAYA IRI PAKAVHA Ndekupi Kwaungawana Rubatsiro Rwekuti Unzwisise Bhaibheri?
Unyengeri! Huchazombopera Here?
OUR READERS ASK Pane Chakaipa Here Nezvinoitwa paKrisimasi?
Sainzi Inopindirana Nezviri muBhaibheri Here?
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku NHARIREYOMURINDI Unokwanisa Kunzwisisa Bhaibheri
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe NHARIREYOMURINDI Unokwanisa Kunzwisisa Bhaibheri
Unokwanisa Kunzwisisa Bhaibheri
NHARIREYOMURINDI Unokwanisa Kunzwisisa Bhaibheri